Inbox ထဲက Message တွေကို တပြိုင်ထဲ ဖျက်မယ်
Gtalk , နည်းပညာ »
လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ်. Inbox ထဲက ဟာကို အရင် delete လုပ်မယ်. ပြီးတာနဲ့ trash ထဲကနေ အပြီးဖျက်ပစ်မယ်.
Inbox ကို နှိပ်ပါ
Select All ကို အမှန်ခြစ် ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
Select All ? conversation in inbox (? = email အစောင်ရေစုစုပေါင်း)
ပြီးတာနှင့် Delete ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
"This action will affect all ? conversations in inbox. Are you sure you want to continue? " ဆိုပြီးတော့ Message Box ပေါ်လာရင်တော့ Ok ပေးလိုက်ပါ . (? = email အစောင်ရေစုစုပေါင်း)
အခု Inbox ထဲက မေးလ်တွေ ဖျက်ပြီးသွားလို့ Trash ထဲကို ရောက်နေတဲ့ မေးလ်တွေကို အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်တော့ပါမယ်.
Trash ကို နှိပ်ပါ
Select All ? conversation in trash (? = email အစောင်ရေစုစုပေါင်း)
ပြီးတာနှင့် Delete Forever ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
"Confirm deleting Messages" ဆိုပြီး Message box ပေါ်လာရင် Ok ပေးလိုက်ပါ.
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ညီဖျက်ချင်တဲ့ မေးလ်တွေကို ခဏလေးနဲ့ ဖျက်လို့ ရသွားပါပြီ. အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ အဆင်မပြေတာလေးများရှိရင် comm ပေးပြီးပြန်လည် ညှိနိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။။။။။။